होमपेज / शुक्रबार / घरसँग बार जोड्ने कहिले?
घरसँग बार जोड्ने कहिले?	03 May 2013 शुक्रबार २० बैशाख, २०७०
चर्चित हास्यअभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले घर जोडेकी छिन्। 'नेपालमा कलाकारितामा लागेर केही छैन' भन्नेका लागि मेहनतको फल पाइन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो। लामो समय भाडाको घरमा बिताएकी उनी शुक्रवारदेखि आफ्नै पसिनाले आर्जेको नयाँ घरमा सरिन्। एक करोड १० लाख रुपैयाँको घरमा दीपाश्रीको बसाइ सन्तोषजनक नै होला। तर, उनका शुभचिन्तकलाई सन्तोष छैन किनभने नेपालीको विवाह गर्ने औसत उमेर घर्काएकी उनलाई उनका शुभचिन्तकले घरमात्रै होइन, घरसँग 'बार' जोडेको हेर्न चाहन्छन्। उनी पनि भन्छिन्, 'मैले उल्टो गरेँ, पहिले घर जोडेँ।' त्यसोभए 'घर'सँग बार कहिले जोड्ने? धेरैले अचेल यस्तै प्रश्न गर्छन्। अनुत्तरित छिन्, उनी। ठट्टा गर्न माहिर दीपा ठट्टैमा भन्छिन्, 'उमेर भा' छैन, सुतेको जोडि्दनँ। जागा रहेको १६ वर्ष त भयो होला।' Tweet Leaveacomment Message *
मरेकालाई बचाउन सम्भव छ?मोटरसाइकल सयरमा निस्किएका अमेरिकी राज्य फिलाडेल्पि्कयाका ३५ वर्षीय वित्तीय विश्लेषक जाच कोनरार्डको बाटैमा 'मृत्यु' भयो। जुन ३, २०१२ आइतवार बिहान उनी बाइक राइडमा निस्किएका थिए। हरेक आइतवार उनी यसरी नै...	विवादले चर्चित अभिनेत्रीहरुवीना मलिकदेखि सोफिया हयातसम्म बलिउडमा कतिपय यस्ता विदेशी अभिनेत्री छन्, जो फिल्म वा आफ्नो कामका लागि नभएर विवादका कारणले चर्चित छन्। उनीहरूको 'इन्ट्री' ले बलिउडमा खैलाबैला नै मच्चायो। बलिउडमा खासै...	'जलकुम्भी' जालमा प्रेममनोज घर्तीमगर- प्राकृति सुन्दरताले भरिपूर्ण पोखरा प्रेमीप्रेमिकाका लागि रोमान्टिक शहर हो। जोडीहरू यहाँ बेपर्वाह फेवाताल, बेगनास ताल, शान्ति स्तुपा, सराङकोट, लभ्ली डाँडा, पावर हाउस, फेवा पार्कलगायत ठाउँमा रमाइरहेका हुन्छन्। तर,...	नयाँ जुनीअघिल्लो शनिवार गएको महाभैँचालोले देशको रूप–स्वरूप, मन–मनस्थिति भत्काइदिएको छ। नागरिक हतास छन्, शोकाकुल छन्, मर्माहत छन्। यो प्रचण्ड दुःखको बेलामा जब कसैले मृत्युलाई जितेको खबर आउँछ, सारा देश हर्षविभोर हुन्छ।...	‘नाच्न जान्नुका फाइदा छन्'सम्झना लामिछाने मगर उदाउँदी लोकगायिका हुन्। उनको स्वरमा रहेका ‘घरमा पराल बारीमा बन्सो', ‘फूल फुलेर पयाँलै भयो' जस्ता गीत चर्चित छन्। नृत्यमा पनि रुचि भएकी उनी मोडलिङ पनि गर्छिन्। केही...	शहीद (कविता)यो देश श्वेतभैरवको मुखबाट निस्कनेलुँ हिटी छोप्न चलिरहेको एउटा प्रतिस्पर्धाआँशु र अट्टहासको एउटा लाखे नाच जहाँ म जन्मनु नैक्रूरताहरूविरुद्ध एउटा प्रतिकार थियो।	सेतो पर्दा : हिट र फ्लप प्रतिभाका मानक होइनन्धेरैजसो नेपाली निर्माता आफ्नो फिल्मका लागि कलाकार छान्दा एउटै फर्मुला अपनाउँछन्। 'बक्सअफिस'मा हिट फिल्म दिएकालाई खेलाउने, फ्लप फिल्मका कलाकारलाई नखेलाउने। निर्देशकले कुनै कलाकारको नाम लिँदा निर्माताले नाक खुम्चाउँदै भन्न सक्छन्,...	'लर्तरो मान्छेले मलाई झेल्न सक्दैन'आस्था राउतको पहिलो एल्बम 'आधार'का गीत 'झुम्के बुलाकी' र 'चौबन्दीमा पटुकी' निकै रुचाइएका छन्। स्टेज कार्यक्रमका लागि यतिबेला उनको माग उच्च छ। देशका साथै विदेशका धेरै ठाउँमा उनले आफ्नो प्रस्तुति...	शुक्रबार	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी...	कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...	मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेनरंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...	भर्खरै...